Google mezigharia profaịlụ Chrome: otu esi emepụta ma hazie ha | Gam akporosis
Otu esi emepụta profaịlụ onwe gị na Chrome: nnukwu ihe ọhụụ nke ihe nchọgharị edegharịrị maka PC na ndị ọzọ
Awa ole na ole gara aga, Google kwupụtara ọkwa ọhụrụ maka ihe nchọgharị ahụ ike ịmepụta profaịlụ onwe gị na Chrome dị ka ohere nke gị ka ị ghara iso onye ọzọ na-ejikwa PC gị, ma ọ bụ ihe ga-abụ mbadamba nkume gị (na-atụ anya n'oge na-adịghị anya na ngwaọrụ ndị a). Ka anyị kwuo na ị degharịrị profaịlụ.
Eziokwu bu na obu ihe ohuru, ebe obu anyị nwere ike iji Chrome onwe anyị maka ọrụ ma ọ bụ ebumnuche onwe onye, ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe anyị na ọtụtụ ndị ezinụlọ kesara PC ma ọ bụ mbadamba nkume ahụ. Nke pụtara na mgbe anyị banyere eCommerce, ngwa ọrụ Google zuru ezu na-enye nke onye ikwu ma anyị ga-abanyekwa na nke anyị ... Nsogbu, bia, ma ugbu a Google edozila.
1 Mgbe ị na-eji PC gị maka ọrụ ma ọ bụ kesara ya karịa ndị mmadụ
2 Otu esi emepụta oghere nkeonwe dị ka profaịlụ na Chrome
3 Nweta site na ngwaọrụ ndị ọzọ
Mgbe ị na-eji PC gị maka ọrụ ma ọ bụ kesara ya karịa ndị mmadụ
Kedu maka profaịlụ dị ka gị ohere nke onwe ya na Chrome na-abịa iji nyere aka n'oge ahụ nke a na-egosipụta akụkọ nchọgharị nke onye ọ bụla jirila PC ma ọ bụ mbadamba anyị, ụdị nke emechara ya na ụfọdụ nzere ugbua na kuki (nke ị na-echefughị ​​ịmara nke ikpeazụ Nkwupụta Mozilla kpọrọ Total Cookie Protection) nke onye ikwu, ma ọ bụ na ịchọtara isiokwu gbanwere mgbe ịchọrọ agba agba.
Eziokwu ahụ ọ na-akụda mmụọ mgbe nke a mere na ugbu a maka anyị, ebe ọ bụ na ibe ndị anyị na-eleta mgbe anyị nọ na ntụrụndụ / ọnọdụ ntụrụndụ ga-adị iche karịa mgbe anyị na-arụ ọrụ.
otú Google etinyela uwe niile ma degharịa profaịlụ onye ọrụ na Chrome nke mere na ọ bụ ahụmịhe ọzọ ka anyị wee nwee ike ịgbanwe n'etiti oghere onwe anyị site na ihe nchọgharị ahụ na-egbochi ndị ọzọ ma ọ bụ onwe anyị.
Otu esi emepụta oghere nkeonwe dị ka profaịlụ na Chrome
Otu n'ime ezigbo ọdịiche dị na redesign nke profaịlụ na Chrome bụ eziokwu ahụ na ogwe ọrụ Windows anyị nwere ike ịgba akaebe dị ka akara ngosi Chrome Emebere ya na profaịlụ nke anyi ji windo ndi ahu meghe.
Ọ bụ ọ bụrụ na anyị mepee profaịlụ ọhụrụ mgbe ahọpụtachara onyonyo nke na - ahazi ya, nke a ga-abụ onye na-achọpụta ya na ogwe ọrụ. Ọ bụrụ na anyị agbanye ya na ogwe ọrụ ahụ, akara ngosi Chrome ahụ ga-egosi na profaịlụ nkeonwe, yabụ ka anyị hụrụ onwe anyị na-enweghị isi ịnyagharịa, anyị ga-eji otu ma ọ bụ nke ọzọ Chrome; dị ka ọ ga - eme ma ọ bụrụ na ezinụlọ ejiri laptọọpụ anyị ka onye ọ bụla nwee profaịlụ ahaziri iche.
Njirimara omenala ọ bụla nwere:
Omenala akara iji mata profaịlụ
Omenala ndabere isiokwu (lee anya na ndi ohuru a)
Echekwaa isiokwu iji gụchaa ma Chrome na gam akporo na desktọọpụ
Ugbu a, ọ ka dị enye agba omenaala na ihe ka amata ọbụna ngwa ngwa mgbe anyị na-eme nchọgharị site na ọrụ ma ọ bụ profaịlụ nkeonwe; Otu ihe a nwere ike ịbara ndị ezinụlọ dị iche iche ma ọ bụ mgbe anyị na-arụrụ ndị ahịa dị iche iche ọrụ.
Nweta site na ngwaọrụ ndị ọzọ
Ee ị na-aga nwere ike mepụta akaụntụ Google ọzọ iji nwee ike ịnweta profaịlụ dị iche site na otu PC ọ bụrụ na ị chọrọ mgbe ahụ na-eji ya na ngwaọrụ ọzọ. Ọ bụrụ n'ịgbalị ịmepụta profaịlụ omenala ma nwaa ịmekọrịta ya na otu akaụntụ ahụ, ọ ga-agwa gị na ejirila akaụntụ a na PC.
Emepụtara ma ọ bụ jiri ọzọ, anyị nwere ike gakọrịta ka na mgbe anyị na-aga anyị mobile anyị nwere ya mekọrịta na PC ahụ ma ọ bụ mbadamba nkume anyị nwere ike ịhọrọ otu ma ọ bụ profaịlụ ọzọ.
Nnukwu atụmatụ Google mere ka anyị nwee ike ikewapụ onwe anyị na ndụ ọkachamara site na ihe Ka anyị jiri profaịlụ Chrome ndị a mee nchọgharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi emepụta profaịlụ onwe gị na Chrome: nnukwu ihe ọhụụ nke ihe nchọgharị edegharịrị maka PC na ndị ọzọ
WhatsApp ga-agbakwunye nhọrọ iji bibie onwe anyị ihe oyiyi anyị na-ekerịta